Mucaaridka Siilaanyo oo midoobay kana digay dib u dhac ku yimaada doorashada – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Labada Xisbi Mucaarad ee Somaliland Ucid iyo Waddani,ayaa maanta gaadhay heshiis ku salaysan isbahaysi lagu xoojinayo Mucaaradnimada kadib markii dhawaan ay soo baxeen kala qaybsanaan u dhexaysa laba Xisbi.
Labda Xisbi ayaa go’aan midaysan ka qaadanaya dib u dhac ku yimaada doorashada, iyagoo ka midaysnaan doono guud ahaan arrimaha la xidhiidha doorkooda mucaaradnimo.
Xoghayaha Xisbiga Mucaaradka ah ee Ucid Cabdinaasir Qodax,ayaa ugu horayn kulanka ka hadlay waxaanu sharaxay heshiiska labada dhinac “Waxaanu maanta halkan iskugu nimid, waad la socotaan xaaladda wadanku halkay marayso,waxaanu kuwada soconnaa oo halkan ku shiray labadii Xisbi Ucid iyo Waddani, waxaana halkan iskugu yimid laba Guddi oo labada Xisbi Soo kala saareen oo ka arrinsanaysa Xaaladda guud ee maanta waddanku marayo iyo doorashada inaggu soo foolka leh iyo wixii laga yeeli lahaa iyo sidii ay u qabsoomi lahayd, Arrimahaas ayay laba Xisbi ka tashanayaan” ayuu yidhi Xoghayaha Ucid
Xoghayaha Ucid waxa uu sharaxay Iskaashiga labada dhinac ku heshiiyeen “Waxaanu ku heshiinay, In aanu yeelano Iskaashi Buuxa oo Mucaaradnimo haddaanu nahay labada Xisbi Mucaarad, oo aanu ka tashanay oo aanu isku waafaqnay wixii laga yeeli lahaa doorashada soo socota.waxaynu Ognahay in 26-ka June ay ku eegtahay Doorashadii Madaxtooyada iyo Wakiilada, Wakiilada 2005-tii ayaa la doortay ilaa haddana way fadhiyaan, Madaxtooyadana waxay kaga eegtahay 26-ka June, markaa 26- June kabacdi wixii laga yeel lahaa ayaanu isla afgaranay.
Midawgaas aanu Maanta ku midaynayna waa mid aanu iskaga kaashanayno sii xoojinta wada shaqaynta labada Xisbi iyo Noolaynta ama adkaynta Dimuqraadiyadda.waxaanu ka soo horjeednaa oo isla waafaqnay in Muddo kordhin la sameeyo,Muddo kordhinta oo maalmahan inaggu soo badanaysay ayaanu isla garanay inaan Muddo kordhin la samayn” ayuu yidhi Xoghayaha Ucid.
Dhanka kalena Axmed Xaaji Cabdilaahi Xamarje,oo Xisbiga Waddani Ka tirsan ayaa kulankaasi ka hadlay waxaanu sheegay inay Labada Xisbi kuwada socdaan qabashada doorashada 26 June 2015-ka“Waxaanu kuwada soconaa oo Gudoomiyahayaga ku matalnaa inaanaan Sharci u arag Xukumadda iyo Wakiiladaba 26-ka June kadib” ayuu yidhi Mr Xamarje.
Heshiiskan Mucaaradka ayaa imanaya kadib markii todobaadadan ay u socdeen wada xaajoodyo ku saabsan arrimahan oo jawaab u ahaa hadal Xisbiga Ucid ka soo yeedhay kuna sheegay inaan Waddani iyo Xukumaddu diyaar u ahayn doorashada 26-ka June 2015-ka.
Xigasho: Ramaas News
Daawo sawirrada ciidamo la kala dhex dhigay beelo ku dagaalamay Baledweyne